Tamin’ny asabotsy : olona 10 vaovao mararin’ny pesta | NewsMada
Tamin’ny asabotsy : olona 10 vaovao mararin’ny pesta
Raha ny tatitry ny BNGRC farany voaray omaly, nisy olona 10 vaovao hafa indray mararin’ny pesta ny asabotsy teo. Eto Antananarivo avokoa ny enina amin’ireo, any Toamasina sy Bongolava ary Vakinankaratra sy Amoron’i Mania ny ambiny.
Tsikaritra fa efa mihena ny fihanaky ny valanaretina raha oharina ny tamin’ny fiandohan’ity volana oktobra ity. Tsy nisy ny fahafatesana vokatr’ity aretina ity voarakitry ny tatitra raha tao anatin’ny roa andro izao.
Manodidina ny 122 ireo marary mbola manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly manerana ny Nosy raha ny voalaza hatrany raha nahatratra 245 izany tamin’ny 24 oktobra lasa teo.
Mbola mampatahotra ny olona ny aretina hatramin’izao na ezahin’ny fanjakana halefahina aza ny vaovao mahakasika izany.
Marihina fa niteraka tahotra teo amin’ireo olona marary hanatona hopitaly sy toeram-pitsaboana ihany koa ity aretina pesta ity satria nolazaina fa voan’ny pesta avokoa ny ankamaroan’ireo narary ka namonjy tobim-pahasalamana tato ho ato vao misy hafanana kely.
Lasa manao dokotera tena ny olona vokatr’izany. Ny sasany miafina amin’ny manodidina mihitsy raha tsy salama satria anaovan’ny fiarahamonina tondromolotra ka soketaina ho mararin’ny pesta raha vao marisarisa ary itsoahan’ny manodidina mihitsy aza.
Andro tsy iasana fa hanaovana fanadiovana faobe
Nilaza moa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery nandritra ny fandaharana mahazatra isan-kerinandro fanaony fa hisy ny andro tsy hiasana hatokana ho amin’ny fanadiovana ranofotsiny ato ho ato. Handray anjara amin’izany fanadiovana izany avokoa na ny tompon’andraiki-panjakana na ny miaramila na ny olon-tsotra.
Hotapahina mandritra ny filankevitry ny minisitra kosa izany andro tsy hiasana fa hatokana ho an’ny fanadiovana izany. Tanjona ny hamongorana tanteraka ny aretina pesta izay mampihorohoro ny Malagasy tato ho ato.